:: My Little World ::: Myanmar Restaurants - Singapore
Posted by Nay Nay Naing at 8/06/2008 06:09:00 PM
ဒီနေ့ နေ့လည်ပဲ အင်းလေးမှာစားလာတာ။ ပထမတော့ ဆိုင်အသစ်မှာစားမယ်ဆိုတော့ အိုရီယန်တယ်ဟောက်စ် ကမဖွင့်သေးဘူး၊ ကျန်တဲ့ဆိုင်တွေကလည်း နေနေနိုင်ပြောသလို menu မှာပါတာတွေမရတော့၊ အင်းလေးကိုပဲ ခြေဦးလှည့်မိတယ်။
အင်းလေးက Service ကတော့ တော်တော်ညံ့တာပဲ လူလည်းမရှိပဲ လုပ်လိုက်တာတလွဲတွေပဲ။
ငါးသလောက် မမှာပဲ လာချတယ်၊ မှိုကဇွန်းဆိုတော့ ကဇွန်းပဲငပိလာချတယ်၊ ဟင်းချိုမှာတာ မေ့နေတယ်။ ဟင်းချတော့လည်း ဘာဟင်းလည်းမပြောဘူး၊ လာချတိုင်းမေးရတယ်။ စားပွဲထိုးတချို့ကတော့ စူပုပ်ပုပ်နဲ့။ လုပ်တဲ့အလုပ်ကို လေစားဖို့တော့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း စားပွဲထိုးဖူးပါတယ်။
စားပြီးလို့ အချိုပွဲမှတော့ စားပွဲသုတ်ပေးပါပြောတာ သုတ်မပေးတော့ တစ်ရှုးလေးနဲ့ ကိုယ်တိုင်ပဲသုတ်လိုက်ရပါတယ်။
အင်း… စင်ကာပူမှာ စင်ကာပူပိုက်ဆံပေးပြီးစားတာ မြန်မာservice ပဲရတယ်…
ကောင်းပါတယ် အဲလိုရေးမယ့်လူမျိုးရှိတာ အင်းလေးကကြာတာထုံးစံပါဘဲ။ စားပွဲထိုးလေးတွေက ကျောင်းသားအရွယ်တွေဆိုတော့ အမပြောသလို နားလည်ပေးရမှာပေါ့။ လူခွဲပြီးဆက်ဆံတာတော့ မကောင်းပါဘူး။
ဗဟုသုတ ရပါ၏. ကြုံ လျှင် ကျွေးပါမည်.
no water provided at oriental house..cuz there has no service charge like 10%..
inle has service and they provide water :)
it seem like if ppl ask they provide or something..im not sure..
but i think it is not service that they wil provide the water..
one of the waiter at oriental house is my friend's younger brother :D
ပို့စ်အသစ်မတွေ့လို့ ဒီမှာ နှစ်ခါလာ သွားရည်ကျသွားတာ :P